डिभोर्सले डोर्‍यायो चुचुरो | eAdarsha.com
पोखरा । बिहेको ४ वर्ष नबित्दै पतिले कान्छी भित्राएपछि हीराको जीवनमा दरार आयो । २०५७ सालमा बिहे गरेकी स्याङ्जा बहाकोटकी हीराकुमारी मल्लका एक छोरा र एक छोरी छँदै थिए । परिवार हाँसीखुसी नै थियो । जीवन सहज चल्दै थियो ।
तर २०६३ सालतिर हो । पेसाले ड्राइभर पति एक युवती लिएर घर आए । अपरिचित अनुहार एकाएक दैलो छिरेपछि हीरालाई लाग्यो, ‘कोही होला ।’ सोधपुछ सुरु भयो । हीराको प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै पतिले जवाफ पर्काए–‘मेरो श्रीमती ।’ ती युवतीले पनि विवाहकै संकेत दिइन् । यो घटनाले हीरा छाँगाबाट खसेझैं भइन् ।
त्यस दिनपछि उनको मनमा सन्तोषले ठाउँ लिएन । ‘चटक्कै छाडेर अन्त कतै बस्ने झोक नचलेको होइन,’ हीराले भनिन्, ‘साना लालाबाला थिए । तर काखेबच्चाको लागि आमाको माया सम्झिएँ ।’
केही दिन त घरमै बसिरहिन् । जे भयो भयो अब मिलेर बसौं भन्ने प्रस्ताव गरिन् । तर प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भयो । ‘छोराछोरीको भविष्य हेरेर मिलेर बसौं पनि भनेकी हुँ,’ उनले विगत सम्झिइन्, ‘अर्कीले उल्टै कति पैसा चाहिएको हो, बिटा फाल्दिन्छु भन्दै धम्की दिइन् ।’
पतिको हेलत्व र कान्छीको रुखो वचन सहीसाध्य भएन । अन्त्यमा डिभोर्स रोजिन् । २०६३ सालमा डिभोर्स लिएर हानिइन्, माइतीगाउँ बहाकोटतर्फ । त्यो बेला उनका छोरा मात्र ५ र छोरी २ वर्षका थिए ।
अदालतको फैसलामा छोराछोरी आफूसँग राख्ने तथा पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च बाबुले नै व्यहोर्ने भन्ने थियो । तर छोडपत्रको दिनदेखि फर्केर पनि हेरेनन्, पतिले । छोराछोरीको भविष्यको लागि काम खोज्ने निधोमा पुगिन् । त्यसबेला उनकी बहिनी विष्णु मल्ल पोखरा बस्थिन् । २ महिना जति माइतीघर बहाकोटमै बसेर बहिनीकै सल्लाहमा २०६३ सालमै पोखरा झरिन् ।
विष्णु लेकसाइडस्थित थ्रि सिस्टर एड्भेन्चर ट्रेकिङमा काम गर्थिन् । गाइड गर्न भन्दै बहिनी बाहिर निस्किस्थिन् । पहिलो पटक हीराले ‘गाइड’ शब्द सुनिन् । पछि उनलाई पनि त्यस्तै काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन् । अर्को वर्षदेखि काम थालिन् । सुरुमै ट्रेकिङ रुट पर्यो–अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म । बाटामा भेटिने प्राकृतिक छटाले विगतको दुःख भुलाउँदै गयो । मनमा रौनकता थपिदियो । उनी जोमसोम मुक्तिनाथ, मर्दी आधार शिविर, धम्पुस जताततै पुगिन् । बिस्तारै आम्दानी पनि राम्रै हँुदै गयो । कमाइले आफूसहित छोराछोरीको लालनपालनमा टेवा मिल्यो । अनुहारमा नयाँ कान्ति छायो । अब केही गर्न सक्छु भन्ने आँट पलाउन थाल्यो । आफू ट्रेकिङ हिँड्दा बुहारी र बहिनीले छोराछोरी हेरिदिने गरेको उनी बताउँछिन् ।
हीरा अहिले ४३ वर्ष पुगिन् । ३२ वर्षको उमेरदेखि ट्रेकिङमा थालेकी हुन् । त्यसबीचमा २०७२ सालको भूकम्प प्रभावले केही महिना काम पाइएन । आराम गरिन् । त्यसयता खाली बस्नु परेको छैन । तर गत चैतदेखि भएको लकडाउन मारमा परिन् । पहिले बचाएर राखेको पैसा निकाल्दै जीवन धान्न बाध्य बनायो उनलाई ।
हक्की स्वाभाव, आँटिली अनि इमानदार उनको स्वाभाव नै थियो । त्यो बीचमा नेपाल पर्वतारोहण संघ, गण्डकीले हिमाल चढ्ने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । हिमाल आरोहण कार्यक्रममा महिला पनि सहभागी गराउने पर्वतारोहण संघको योजना थियो । त्यही बीचमा संघको नजरमा परिन् मल्ल ।
उनलाई संघले जानकारी पनि गरायो । लकडाउनमा घरमै बसिरहेकी मल्ललाई हिमाल आरोहण गर्ने प्रस्तावले उत्साहित बनायो । ५ हजार ५ सयसम्म ट्रेकिङ गरिरहेको उनलाई सकिन्छ भन्ने आँट पनि आयो । ट्रेकिङको समयमा नजिकै देखिने हिमालको चुचुरोमा पुग्छु भन्ने मनमा हुट्हुटी चल्थ्यो । मनको ईच्छा पर्वतीय संघले पूरा गरिदिने भएपछि फुरुङ्ग थिइन्, उनी ।
मुस्ताङको ६ हजार १२ मिटर उचाइको धम्पुस पिक चढ्न उनीसहित १० जनाको टोली बन्दोबस्तीसहित पुस २७ मा पोखराबाट बिदाइ भए । टोलीमा ३ जना प्रशिक्षक पनि थिए । टोली पहिलो दिन मुस्ताङको मार्फा, दोस्रो र तेस्रो दिन याक खर्क (४२०० मिटर), चौथो र पाँचौं दिन धम्पुस हिमाल बेस क्याम्प (५२०० मिटर) मा बास बसेको थियो । छैटौं दिनमा धम्पुस पिकको सेकेन्ड टपसम्म जसोतसो पुगे । बढी हावा चलेका कारण सबै जान नसक्ने भनेपछि चुचुरोमा पुग्नेको नाम छनोट हुन थाल्यो । छनोटमा नपरिने हो कि भन्ने उनको मनमा डर थपियो । तर दरो आँट लिएर जान्छु भन्ने निधोमा पुगिन् । उनीसँगै महिला साथी मनु गुरुङ पनि थिइन् ।
राति २ बजे उनीसहित ६ जना चुचुरो चुम्न अगाडि बढे । बाटोमो हावा चलेको कारण केही असहज भएको उनले बताइन् । वेगले चलेको हावाको गतिलाई छिचोल्दै माघ ३ गते बिहान ११ बजेर ४८ मिनेटमा सफल धम्पुस पिकको सफल आरोहण गरिएको उनले सुनाइन् । थापा पिकको नामले पनि चिनिने धम्पुस पिकको चुचुरोसम्म पुग्ने टिममा उनीसहित सुदीप गौतम, दीपेशबाबुु सुवेदी, टासी पासाङ गुरुङ, मनु गुरुङ र सनकुुमार जुग्जाली छन् ।
जब चुचुरोमा पुगिन्, उनको मन चंगा भयो । ‘सबैभन्दा पहिला आमा सम्झिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अनि छोराछोरी र आफन्त सम्झिएँ ।’ त्यस क्षण बाटोमा भोगेका कठिनाइ मात्र नभइ श्रीमान्ले अर्को श्रीमती ल्याएपछि पाएको दुःख समेत भुलेको बताउँछिन् । ‘हिमाल चढ्नु मेरो पहिलादेखिकै इच्छा हो, चढें,’ उनी भन्छिन्, ‘अब जस्तोसुकै हन्डर परे पनि सहन्छु भन्ने साहस पलाएको छ ।’
धम्पुस पिक आरोहण गरेका ६ जनासहित १० सस्ययीय टोली नै पोखराबाट हिडेको आठौं दिनमा सकुशल पोखरा फर्केको छ । टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय, पोखराको १८ औं स्थापना दिवसमा सम्मानसमेत गरिएको छ ।
संक्रमित खोज्न वडा तहमा एन्टिजेन
सविन लामिछाने असार ७, २०७८
दमौली । शुक्लागण्डकी ७ का ३५ वर्षीय पुरुषले वडास्तरमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमक्ष स्वाब दिए । एन्टिजेनमार्फत गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट भने…
सत्ता किचलोले बजेटमा विलम्ब
आदर्श समाज सम्वाददाता असार ७, २०७८
पोखरा । गण्डकीमा अहिले सत्ता किचलो बढी छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले जेठ…
२३ करोडको रामायण पार्क बन्ने
साधन राम्जाली असार ७, २०७८
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–५, पछैमा रामायण पार्क निर्माण हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नगरपालिकाको…
कास्कीमा निषेधाज्ञा खुकुलो, जोरबिजोर आधारमा निजी गाडी चल्ने
आदर्श समाज सम्वाददाता असार ६, २०७८
पोखरा, ६ असार । कास्कीमा विभिन्न सेवा खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा अवधि एक साता बढाइएको छ । जसमा निजी सवारीसाधन जोरबिजोर…
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा तनहुुँका काफ्ले
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा तनहुँका डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले…
संक्रमित घटेसँगै परीक्षणमा कमी
धनबहादुर गुरुङ असार ६, २०७८
सत्ता सहमतिमा मन्त्री नै वाधक !
निगालोको चोया, जिउने सहारा
संविधान जोगाउने दायित्व कांग्रेसमाथि : मुख्यमन्त्री पोखरेल
असार ५, २०७८
विश्वासको मतपछि अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तयारी
‘मेरो जिम्मेवारी जनताको सेवा हो’
एक घर एक रोजगार
कास्कीमा दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
‘रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न योग’
स्याङ्जा अस्पताललाई गोर्खा ट्रस्टकोे सहयोग
एसओएस आमाहरूको सहयोग
सेफ्टी ट्याङ्की भत्किएर दुईको मृत्यु
हाम्रो परिवर्तन नेपालको ज्ञापन
२५ परिवारलाई रेडियो उपहार
मुख्यमन्त्री पोखरेलसहितको टोली राहत सामग्री लिएर मनाङमा
नेपालीले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ३१ सांसद
गण्डकी सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट वक्तव्य- पूर्णपाठ
गण्डकी सरकारले विश्वासको मत लिने सूचना दर्ता
के होला गण्डकी सरकारको विश्वासको मत ?
प्रदेश विपद कोषमा ५ करोड राख्ने निर्णय, मुख्यमन्त्री आजै मनाङ जाने
As NEPSE nosedives, investors lose Rs 98 billion
Probe committee to study high fare in international flights
Delta variant’s mutation of novel coronavirus detected in Nepal
COVID-19: 1,584 new cases, 46 deaths, 3,130 recoveries
Landslide menace evicts seven households
Two killed in road accident in Kaski
Lockdown relaxed in Kaski: Private vehicles to ply on odd-even basis, biz to run until 12pm